Ukuphucula iWindowsPress ukuya kwi-2.05 ngaphandle kokuphazamisa indawo yakho! | Martech Zone
NgoMgqibelo, Oktobha 28, 2006 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ndiyayithanda iWindowsPress kwaye ndiyacebisa kubo bonke abathengi bam. Namhlanje kukhutshwe uhlobo olutsha. Unokufunda malunga nokulungiswa kunye nokukhuphela uhlaziyo Apha. Nazi ezinye iingcebiso zokuphucula:
PHAWULA: Zama ukunqanda 'ukugqobhoza' ikhowudi engundoqo kwiWordPress, yenza ukuphucula kube lula kakhulu. Ndine 'hacks' ezimbalwa kodwa ndizigcina zibhaliwe ukuze xa ndikhuphela ingxelo yamva nje, ndenze ukuhlela kwam ndiqhubeke. Kulumkele ukubeka naluphi na uhlobo lweefayile okanye iifolda zesiko nakweyiphi na incwadi engaphandle kweyakho WP-umxholo ifolda.
Ngethuba nje ungakhange uqhekeze iWindowsPress, inkqubo yokuphucula iqonde ngqo phambili (imifanekiso ye Uloyiko lokuhambisa i-3.5.5)
1. Vula iKlayenti lakho le-FTP, khetha zonke iifayile kuphuculo lweWordPress kodwa FUMANA ifayile ye WP-umxholo ifolda. Khuphela ngaphezulu kweefolda ezikhoyo kunye neefayile.
2. Ngoku, vula ifayile ye- WP-umxholo ulawulo kumthombo wakho nendawo ekuyo ifolda. Khuphela ngaphezulu kwefayile ye-index.php.
3. Okokugqibela, rummage through the WP-umxholo iifolda ezingaphantsi kumthombo wakho kunye nendawo ekuyalelwa kuyo ifolda. Khuphela ngaphezulu kwemixholo kunye neeplagi njengoko kufuneka, kuthintele ukucima naziphi na iiplagi kunye nemixholo oyongezile kwaye wayiguqula.
4. Inyathelo lakho elilandelayo kukungena kwi-interface yakho yoLawulo (wp-admin). Uya kuyalelwa ukuba uphucule indawo yogcino lwedatha. Cofa iqhosha kwaye ugqibile!
Apho unayo, uhlaziyiwe. Ndiyathemba ukuba oku kuyakunceda!
Oktobha 29, 2006 ngo-10: 53 PM
I-Apple-Shift-3 kwaye umfanekiso weskrini ugcinwa kwidesktop yam. Akukho 'Shicilelo-lweScreen' okanye 'iAlt-Printa-iScreen', iMifanekiso evulekileyo, uncamathisele, isityalo, gcina iwebhu, wenze ubungakanani kwakhona, usete uhlobo lomfanekiso, gcina.
Okt 30, 2006 ngexesha 7:44 AM
Kutshanje ndilungise i-iBook G3 yamhlophe emhlophe. Ibaleka iTiger ngokugqibeleleyo kwaye iyayiqhekeza kwaye ibuyisele kwakhona kwakhona yayiyimpepho enkosi kwizikhokelo eziluncedo ze-ifixit.com. Awungekhe ukwazi ukuyithetha loo nto ngee-PC ngaphandle kokuba uyingcali yokuzihlula; mna, andizange ndiyenze into enje ngaphambili.
Xa i-PC ekugqibeleni isifa, indlu yethu, ubuncinci, iya kutshintshela kwi-Mac Mini. Andinamdla wokusondela nakweyiphi na ikhompyutha eqhuba iVista.
Unyanisile malunga ne-OS. I-GUI iyamangalisa kwaye inomdla.
Oktobha 30, 2006 ngo-7: 26 PM
Ndigqibezele uhlaziyo, ndasebenza kuyo nayiphi na ingxaki. Enkosi!